IPirates ihloma ngezibabuli zabadlali kodwa eyomqeqeshi ayicaci
July 5, 2021 Impempe.com
Seziqalile izinguquko ezikhomba ukushintshwa kwezinto kwi-Orlando Pirates okuthe ngoMsombuluko yadalula abadlali abane eqinisa ngabo iqembu – kodwa ayithi vu ngomqeqeshi.
IPirates iqede isizini edlule zisendaweni yesithathu kwilogi kodwa kuyahlaluka ukuthi kulokhu
zifuna okungaphezulu kwalokho.
Laba badlali ngoGoodman Mosele, Monnapule Saleng, Bandile Shandu noKwandakwenziwa Mngonyama.
UMosele, obedlala leli okuthiwa linenkosi phakathi kwiBaroka FC ngesizini edlule, usayine inkontileka
yeminyaka emine neBucs.
Lo mdlali, owaqokwa waba yiYoung Player of the Season, uzojoyina iPirates uma esebuya emidlalweni yama-Olympics, eTokyo, eJapan. Ungomunye wabadlali azobeka amathemba kubona umqeqeshi weqembu lesizwe lakuleli le-Under 23, uDavid Notoane.
USaleng, ongumdlali wasesiswini ohlaselayo, oqede isizini yeGladAfrica Championship ezihola phambili
ngokuhlohlwa kwamagoli, usayine inkontileka yeminyaka emithathu neZimnyama.
Lo mdlali ubegijimela iFree State Stars ngesizini edlule kanti ubengayibheki inethi. UMngonyama noShandu basayine iminyaka emibili emunye ngemuva kokuphela kwezinkontileka zabo neMaritzburg United abebedlala kuyo ngesizini esanda kuphela.
IPirates izodlala kwiCAF Confederation League ngesizini ezayo nokuchaza ukuthi kumele isikwati sayo siqine. Abalandeli abaningi bakholwa ukuthi iPirates bekumele yenze kangcono ngesizini edlule uma kubhekwa
FUNDA NALA: IPirates ibuyele ejimini engekho uZinnbauer
Nokho leli qembu elicijwa nguJosef Zinnbauer alenzanga kabi neze uma kubhekwa ukuthi liwine indebe yeMTN 8. Ngaphezu kwalokho bakhona abalandeli abafuna angabe esabuya uZinnbauer, okuyimanje ukwelakubo eGermany.
Kunamahlebezi okuthi uZinnbauer ngeke esabuya kanti umsebenzi wakhe uzothathwa nguSteve Komphela. IPirates seyivele iqashe uMandla Ncikazi obekwiGolden Arrows ngesizini edlule.
Kuthiwa lokhu kungenxa yokuthi ifuna ukushintsha ithimba layo labaqeqeshi. Ukungafiki kukaZinnbauer ngosuku lokuqala lokuzicijela isizini ngenye yezimpawu zokuthi lo mqeqeshi akasabuyi.
Impempe ithole nokuthi leli qembu alikaqedi ukusayina abadlali njengoba kuesenezingxoxo eziqhubekayo nabanye elibafunayo. Kulabo badlali kukhona nomgadli osemncane u-Evidence Makgopa. Nonozinti weGolden Arrows, uSifiso Mlungwana kungenzeka ajoyine iPirates nozakwabo wasemuva uNkosinathi Sibisi.
Kuthiwa iPirates izomsayina kodwa bese eqhubeka adlale kwiBaroka ngesizini ezayo ukuze aqine kahle ukhakhayi. Kukhona nokulindeleke ukuba ibachithe okubalwa kubo noCollins Makgaka obelizwa ngendaba ijezi ngesizini edlule.
U-Abel Mabaso yena akucaci ukuthi inkontileka yakhe izovuselelwa yini futhi sekuthanda ukumbhedela njengoba sekukhona uMosele nje. UJustice Chabalala naye kuvele ukuthi eyakhe ngeke ivuselelwe.
EMAIL: Editor@impempe.com |TWITTER: @impempe_com | FACEBOOK: Impempe SA
Previous Previous post: USeema ubona kulula ukuqhubeka la okugcine khona uNcikazi kwi-Arrows
Next Next post: UNcita uthi singqinyuzwe ngomlalisa phansi isibhakela kushona uLedwaba